भिसा रद्द गराए वापत मैले म्यानपावर कम्पनीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ ?
Mon, Aug 10, 2020 | 11:49:54 NST
Total Hits: 4.3 K
धुर्ब भण्डारी, धादिङ
प्रश्न : मलेसियाका लागि मेरो कलीङ्ग भिसा आएको थियो । अन्तिम श्रमस्वीकृति पनि भएको थियो । तर मेरो पेटमा घाँउ देखियो । छ महिना यात्रा नर्गन डाक्टरले सुझाव दिएकोले भिसा रद्द गराएँ । भिसा रद्द गराए वापत मैले म्यानपावर कम्पनीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – वैदेशिक रोजगार विभाग ऐन २०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भिसा प्राप्त भएपछि जान नचाहेको खण्डमा लागेको खर्च क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ । भिसा वापत वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि पैसा तिरेका हुन्छन् । भिसामा छाप नलागेको खण्डमा सात हजार रुपैया र लागीसकेको भए १० हजार रुपैया तिर्नु पर्ने हुन्छ । प्रमाण हेरेर त्यसै अनुशार रकम भुक्तान गर्दा हुन्छ ।